३६ लाख ५५ हजार कित्ताको नयाँ आईपीओ आउदै ! – News543Online
३६ लाख ५५ हजार कित्ताको नयाँ आईपीओ आउदै !
March 28, 2021 adminLeaveaComment on ३६ लाख ५५ हजार कित्ताको नयाँ आईपीओ आउदै !
बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीले ३६ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको सर्वसाधरण शेयर आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । आईपीओ जारी गर्न यस हाइड्रोपावरले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डसँग फागुन २५ गते अनुमति मागेको छ ।
बलेफी हाइड्रोपावरले स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि ३६ करोड ५५ लाख ९४ हजार बराबरको ३६ लाख ५५ हजार कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई र बाँकी १८ लाख २७ लाख ९७० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागिनिष्काशन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश,सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गुम्बा र गोल्चे गाविसहरुमा अवस्थित बलेफीखोलाको पानीबाट ३६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ए जलविद्युतआयोजनाअहिले निर्माणको चरणमा रहेको छ । आयोजनाको कम्पनीको कुल लागत ६ अर्ब ७८ करोड रहेको छ ।
जसको प्रति मेगावाट लागत १६ करोड ९० लाख रहेको छ । लगानीफिर्ता ८ वर्ष २ महिनामा हुने छ । बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।
बिल्कुलै बेवास्ता नगरी ॐ लेखी फोटोलाई छुनुहोस।सेयर गर्नुहोला तपाईको जीवनमा धनको बर्षा हुनेछ !
जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही चर्चित नायिकाको दुखद निधन?
घरमा हुन्छ 100 रोगको उपचार कसरी गर्ने